ကျွန်မနဲ့ PUK အဲ့ဒိမှာ စတွေ့တာပဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ကျွန်မနဲ့ PUK အဲ့ဒိမှာ စတွေ့တာပဲ
ကျွန်မနဲ့ PUK အဲ့ဒိမှာ စတွေ့တာပဲ
- myat pearl phyu
Posted by myat pearl phyu on Feb 13, 2014 in Community & Society, My Dear Diary | 28 comments
အချိန်က ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရက် ည ၁ဝ နာရီ .. ဒေါ်MPP တို့ ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ တိုင်ပတ်နေပါပြီ …။ ကိုယ့်ဖုန်းကို Security ပိုင်း လုံခြုံအောင်ဆိုပြီး GSM ဖုန်း Sim Card ကို Password နဲ့ Lock ချထားမိတာကနေ …
သောကြာနေ့ညက ဖုန်းကို Restart ပေးပြီး ပြန်တက်လာတော့ Sim card password တောင်းတော့ ရိုက်လိုက်တယ်… xxxxxx ပေါ့.. မရဘူး မှားတယ်..။သုံးကြိမ်မှားခွင့်ရှိတယ်ပေါ့2times left. ဒါနဲ့ နောက်တစ်ခါ ထပ်ရိုက်လိုက်တယ်..ထပ်မှားပြန်ပြီ ၁ကြိမ်ပဲကျှန်တော့တယ်..စိတ်ထဲလည်း ထွေသွားတယ်..ငါဒီပက်ဝက်ကို အမြဲရိုက်နေကျပါ..ဘာများမှားလို့ပါလိမ့်ဆိုပြီး ..ကဲ ဒိတစ်ခါ ထပ်ရိုက်မယ်ဆိုပြီး ရိုက်တာမှာ ၃ ကြိမ်မြောက်အထိ ပက်ဝက်မမှန်လို့ဆိုပြီး sim card locked ကျသွားပါတော့တယ်ပေါ့..။
သေပြီ ..ဖုန်းကလည်း ဆက်လို့မရ emergency call only ဆိုပြီးပဲပြတော့တယ်..။ အဲ့ဒိမှာ PUK နဲ့ စတွေ့တာပဲ..။ သူက PUK code ရိုက်ထည့်ပါ …New Pin Code ထည့်ပါလို့ ပြောလာတယ်..။ ကိုယ်လည်း PUK ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိ..ဖုန်းစာချုပ်မှာ ပါတဲ့ Sim card no ကိုထည့်ပြီး တစ်ခါ..အရင် ပက်ဝက်ပေးထားတဲ့ နံပါတ်ကို တစ်ခါ ၂ကြိမ်ထည့်ပြီး စမ်းလိုက်တယ်..မဟုတ်သေးဘူးတဲ့..သူကတော့ ၁ဝ ကြိမ်မှားခွင့်ရှိတယ်တဲ့..အဲ့ဒိတော့ ကိုယ့်မှာ 8 times left ကျှန်သေးတယ်..ထပ်မစမ်းရဲတော့ဘူး..စမ်းရင်းစမ်းရင်း အကြိမ်တွေကုန်သွားမှဖြင့်.. ဘာဒွေဆက်ဖြစ်ဦးမယ်မသိ…အဲ့ဒါနဲ့ အစ်မဆီ အိမ်ဖုန်းနဲ့ လှမ်းဆက်မေးတော့ သူက အဲ့ဒီလို ကတ်ပျတ်တာ လော့ကျတာဆို ဗဟန်း ရွှေဂုံတိုင်ဆက်သွယ်ရေးရုံးကို သွားပြီးပြန်လျှောက်ရတယ်ဆိုပါတယ်…
ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းဆင်းကတ်ဝယ်တုန်းက ကတ်ချိုးတုန်းက ကတ်လေးဘေးနားမှာ ကုတ်နံပါတ်တွေ ပါတယ်ပေါ့…အဲ့ဒိဟာကို ရိုက်ထည့်ပြီး တစ်ချို ့ဆိုင်တွေက စမ်းကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်..အဲ့ဒိကတ်ကလည်း ဖုန်းဝယ်ပြီးကထဲက ဘယ်နားသိမ်းလိုက်မှန်းမသိအောင် အသိမ်းလွန်ကာ အရေးကြုံက ရှာမရတော့ပါ..ကဲ ဒါနဲ့ မထူးပါဘူး ဆက်သွယ်ရေးပဲသွားလိုက်ပါ့မယ်ပေါ့…နောက်နေ့က ပြည်ထောင်စုနေ့ ပိတ်ရက်ဆိုတော့..ရုံးသွားလို့ မရသေးဘူး..။အဲ့ဒါနဲ့ ဖုန်းဆိုင်ကို မေးကြည့်တော့ လှည်းတန်း Touch က sim card lock ကျတာကို ၃ ရက်စောင့်ရမယ်တဲ့..တစ်ပါတ်လောက်လည်းကြာနိုင်တယ်တဲ့ ..ဘယ်လောက်ကုန်မလဲဆိုတော့ တစ်သောင်း ၊ တစ်သောင်းခွဲလောက်ကျမယ်တဲ့…(ဟင် ဟုတ်လား ..ပချံတော့ထပ်ထွက်ရဦးမယ် ..ဗြဲ )..ပေါ့ ။ ဆိုင်ကို ဖုန်းစာချုပ်ရယ်..မှတ်ပုံတင်မိတ္တူနဲ့ ယူလာပါတဲ့ ..။ ဒါနဲ့ နေဦးပေါ့..အိမ်နားက. .နောက်တစ်ဆိုင် ထပ်မေးတော့ သူက Pin code lock ကျတာလားတဲ့ ..မဟုတ်ဘူးလို့ PUK Lock ဆိုတော့ မရဘူးတဲံ ဗဟန်းဆက်သွယ်ရေးရုံး သွားမှရမယ်ဆိုပါတယ်..သူတို့လုပ်ပေးမယ်ဆို ၁၂၀၀ဝ ပေးရမယ် ၃ ရက် ၄ ရက်လောက် စောင့်ရမယ်ဆိုပါတယ်…ကဲ မထူးပါဘူးလေ..ကိုယ့်ဘာသာ ရုံးနေ့ဝက်ယူပြီး ဆက်သွယ်ရေးသွားလုပ်ပါတော့မယ်ပေါ့..
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက် မနက် ၉ နာရီမထိုးခင်မှာ မေမေနဲ့တူတူ ရွှေဂုံတိုင် ဆသရသို့ တက်ကစီနဲ့ ချီတက်ကြတာပေါ့လေ…ဟိုလည်းရောက်ရောပွဲစားတွေနဲ့ စတိုးတာပါပဲ..ဘာလုပ်မှာလဲပေါ့ ကတ်ပျက်လား ကတ်ပျောက်လားတဲ့…ဘာမှမပျက်မပျောက်ဘူးလို့ ဆိုပြီးကိုယ့်ဘာသာ ရုံးထဲဝင်သွားကြတယ်..ကတ်ပျောက်ကောင်တာရှေ့မှာ မေးတာပေါ့..PUK Lock ကျသွားလို့ပါ Code no; တောင်းနေလို့ပါလို့ ဆိုတော့ စာရေးမကပြောတယ်..အဲ့ဒါ ဒီမှာမရဘူးတဲ့..ဟံသာဝတီအဝိုင်းက ဝေဋူ ဝန် အိတ်ချိန်း မှာ သွားလုပ်ရမယ်တဲ့..တိန် …ကဲ ..ဒါဆိုလည်း အဲ့ဒီပဲသွားရတော့မှာပေါ့နော်..အပြင်ထွက်တော့ ပွဲစားတစ်ယောက်ကလာပြောတယ်..၈၀၀ဝ ပေးရင် ၁ နာရီလောက်စောင့် ..ရမယ်တဲ့ …ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲသာသွားရင် ပေးမိချင် ပေးမိဦးမှာ..ကိုယ်က ဟိုသွားရ ဒီသွားရနဲ့ စိတ်က သိပ်ရှည်တာ မဟုတ်ဘူးလေ ..၅၀၀ဝ လောက်မရဘူးလားလို့ ဈေးစစ်လိုက်သေးတယ်..ပွဲစားက တင်းတင်းပဲ မရဘူးတဲ့.. မေမေပါတော့ မေမေက မပေးနဲ့တဲ့ ကိုယ့်ဘာသာသွားမယ်ဆိုတော့..ကဲ ..တက်ကစီပေါ်တက်ကြပေတော့ပေါ့…ကားလမ်းတွေကတော့ ထုံးစံအတိုင်း လမ်းပိတ် မီးပွိုင့်တန်းစီပေါ့.. မထသ ၄၈ အထူးနဲ့ နောက်ကားတစ်စီး ယာဉ်တိုက်မှုတစ်ခုရှေ့မှာ ဖြစ်နေတော့ နောက်မှာ ကားတွေက တန်းစီ ဂျမ်းဖြစ်နေတာပေါ့ ..
ကဲ ဒီလိုနဲ့ပဲ..ဟံသာဝတီ ဆသရသို့ ရောက်ပါပြီ …ဝင်ဝင်ချင်းတွေ့တဲ့ အဆောက်အဦးအပေါ်ထပ်ကို တက်လိုက်ကြတယ်..အဲ့ဒိမှာ ရုံးခန်းက ဖုန်းနံပါတ်တောင်းတယ်..ကိုယ့်ကတ်က ပုံမှန် sim card ကိုမှ ထပ်ပြီး တစ်ဝက်ထပ်ချိုးထားတဲ့ အသေးလေး ဖြစ်နေတော့ အဲ့ဒိဘေးက ချိုးထားတဲ့အပိုင်းလေးမှာ နံပါတ်တွေပါတယ်တဲ့ ..
အဲ့ဒါရှိလားဆိုတော့ ..အဲ့ဒါကလည်း မရှိတော့ပါဘူးပေါ့..ဖုန်းနံပါတ်ပြောဆိုလို့ နံပါတ်လေးပြောပြီး..ဒါနဲ့ သူတို့ ရုံးခန်းအပြင်မှာ ခဏစောင့်ပါဆိုပြီး အထဲဝင်သွားတယ်..ကိုယ်နဲ့ မေမေက အပြင်စားပွဲလေးမှာ ထိုင်စောင့်ပေါ့…၁၅ မိနစ်လောက်လည်းကြာတော့ …စာရေးမတစ်ယောက်ထွက်လာတယ်..သူတို့ဆီက ၄၂၁ နဲ့စ တာ မရဘူးတဲ့..အဲ့ဒါက အနောက်ကပ်လျှက်အဆောင်အပေါ်ထပ်ကိုသွားပါတဲ့…အဲ့ဒါများ မရရင် စောစောကမပြောဘူးနော်…ကတ်လေးပြန်ယူပြီး အောက်ကိုပြန်ဆင်းကျ..ဟိုဘက်အနောက်က အဘက်ကပ်လျှက် အဆောင်ပေါ်ထပ်လှေကားထပ်တက်ကြပေါ့..ရောက်ပါပြီ..အဲ့ဒိမှာ ကတ်လေးပေး နံပါတ်ပြောပြီး..ခဏစောင့်ရတယ်..ကိုယ့်လိုပဲ လော့ကျလို့ ကောင်လေးတစ်ယောက်လည်း ရောက်လာတယ်..သူလည်း ရွှေဂုံတိုင်ကနေ ပြန်လာတာတဲ့ ..ဘဝတူတွေလေ..အဲ့ဒိမှာ ၁ဝ မိနစ်လောက် ခဏစောင့်ပြီး အဲ့ဒိက အစ်မက ကွန်ပျူတာနဲ့ကုတ်သွားရှာပေးပြီးဖုန်းမှာဖြည့်လိုက်တယ်..ဖုန်းကတ် Unlocked ပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်…အဲ့ဒီက အစ်မကပြောတယ်..PUK code ပဲ မို့လို့ပေါ့..၁ဝ ကြိမ်ထပ်လည်း ပိုစမ်းထားလိုက်မိရင် ကတ်က အပျက်မရတော့ပဲ ကတ် အပျောက်နဲ့ ထပ်လျှောက်ရမှာတဲ့ အဲ့ဒါဆို ၂၀၀၀ဝ ပေးရမယ်တဲ့ရှင် …ကိုယ်လည်း Sim card လော့ကိုဖြုတ်ပလိုက်တယ်…ရပြီဆိုတော့ မေမေ နဲ့ ပြန်လာကြတာပေါ့..ဒါပါပဲ ပိုက်ဆံလည်း မပေးခဲ့ရပါဘူး..သူတို့ကလည်း မတောင်းပါဘူး…ကြားပွဲစားတွေနဲ့ လုပ်ရင် ၈၀၀ဝ ပေးရဦးမှာ..အဲ့ဒါနဲ့ ရုံးကို တက်ကစီ နဲ့ ပြန်ပေါ့ မေမေ့ကို လမ်းမှာဝင်ချပေးပြီး ကိုယ်ကတော့ဆက်သွားပေါ့..။ တက်ကစီဖိုးတွေကတော့ ကုန်တာပေါ့ရှင်..။အော်…password , password…
အဲ့ဒိ Password အခံကောင်းလို့ ပြဿ နာတက်တာလည်း အကြိမ်ကြိမ်ပဲ ..ရုံးမှာလည်း ဆာဗာပက်ဝက်ကို မှားရိုက်မိတာမှာလည်း account lock ကျပြီး..အလုပ်တွေကို ရှုပ်သွားပါကောလား..သူလည်း ၃ကြိမ်ထပ်ပိုမှားခွင့်မပေးဘူးလေ…ဖုန်းနဲ့ပါတ်သပ်ပြီး အမှတ်တရလေးတစ်ခုပေါ့ရှင်..
စာဖတ်သူမိတ်ဆွေတို့လည်း ဖုန်းဆင်းကတ် ဝယ်မယ်ဆို..ကတ်ချိုးပြီးရင် ကတ်အဟောင်းလေးကို သေချာသိမ်းထားကြဖို့နဲ့…မူလဆင်းကတ်ကိုမှ ဖုန်းဟန်းဆက်ပြောင်းလို့ ကတ်ထပ်ချိုးရမယ်ဆို ချိုးလိုက်တဲ့အပိုင်းလေးကို သေချာပြန်တောင်းထားဖို့ သတိပြုပါနော်…အဲ့ဒါဆိုရင်ဖြင့် ကျွန်ုပ်လို့ ဆက်သွယ်ရေးရုံးတွေဆို ပြေးရလွှားရ မေးရမြန်းရနဲ့ တက်ကစီသမားအလုပ်အကျွေးမပြုရတော့ဘူးပေါ့ရှင်…နောက်လူတွေလည်း ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတူခဲ့ရင် သိရအောင် ရေးလိုက်တာပါ..လက်တွေလည်း ညောင်းပြီ ..အမှားပါရင် ခွင့်လွတ်ဖတ်စေချင်ပါတယ်..
အဲ့ဒါနဲ့ပုံလေးတွေပါ ထည့်ချင်လို့ Googling လိုက်တော့ ဒီပိုစ့်လေးတွေ သွားတွေ့တယ်..ဒီလာခ့်လေးတွေကတွေ သွားပြီး ဗဟုသုတယူဖတ်ရှုလိုပါက Juz One click ပါနော်…Sim card ရဲ့PIN/ PUK lock အကြောင်းနဲ့ ဖြေရှင်းနည်းပါတဲ့ …။
About myat pearl phyu
myat pearl phyu has written5post in this Website..
View all posts by myat pearl phyu →
အနော်ကတော့ ဖုန်းမှာ ဘာလော့ခ်မှ မထားဘူး ၊
ဖုန်းရုံးအကြောင်းကတော့ သားအဖနှစ်ယောက် နှစ်ရက်ဆက် ဖုန်းကိုယ်စီပျောက်ကတည်းက မှတ်သွားပါပြီ ၊
အခု လည်ပင်းမှာဆွဲထားပါတယ် ၊
အစိုးရရုံးတွေများ ဘယ်ရုံးတွေနဲ့ မှ (ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လေ..) မဆက်ဆံချင်ဘူး …
Passport လုပ်တာ၊ လိုင်စင်လျှောက်တာ၊ကျောင်းသားရေးရာ၊ တရားရုံး၊ ရပ်ကွက်ရုံး၊ ရဲစခန်း အစရှိသဖြင့်….ပွဲစား ဒွေ ရယ် ..လာဘ်ထိုးမှ အမြန်ရမယ့် ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်မယ့်အရာဒွေ
ဒီမိုကရေခေတ်မှာ ကုန်ဆုံး လွန်မြောက်ပါစေ… လို့ ..ညည်းရင်းသာ … ေိခိ
ကွကိုယ် BC ပေးတယ်လား ..အဟေးဟေး….
စကားအတင်းစပ် ..ရေးတဲ့ပို့စ်လေးက စေတနာပါတယ်…ဘရာဗိုပါ
ဟုတ်ပု …အဲ့ဒါ ဘာကို မှားနှိပ် မိတလဲ မတိပု …
အဲ့ရိုဖစ်တွားဒါ …ပြန်ဖျတ်ရို့လဲ မရရို့ပါ့ … ေိခိ
Choose another answer as the right one ဆိုတာလေးကို..ပြန် ကလစ်လိုက်ပါခညာ…
မြန်မာတွေအစိုးရရုံးတွေနဲ့မဆက်ဆံချင်ပုံများ.. အစိုးရအသံကြားတာနဲ့ တွန့်ပြီးသားပဲ..
ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်.. ယူအက်စ်ရောက်တာတောင်.. သန်းခေါင်စာရင်းကောက်တာ.. အမှန်မဖြည့်သူနဲ့.. လုံးဝမဖြည့်သူတွေနဲ့လေ..။
ယုအက်စ်မှာ.. ခန့်မှန်း..မြန်မာ၃သိန်းရှိတာမှာ.. ၁သိန်းပဲမြန်မာစာရင်းပြပါသတဲ့..။
အခုမြန်မာပြည်မှာ.. ကောက်တော့မယ့်.. သန်းခေါင်စာရင်းမှာ.. ဘာတွေဘယ်လိုဖြစ်ကြမယ်ရယ်မသိ…။
၂၀၁၅ ပိတ်ကားပေါ်မှာ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပါရန် တဂျီး ….ေိခိ
သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရာတွင် အချက်အလက် မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြေဆိုရန် အလွန်အရေးကြီးပြီး တိကျသည့် ကိန်းဂဏန်းများ အချက်အလက်များ ရရှိမှသာလျှင် နိုင်ငံ၏ လက်ရှိနှင့် အနာဂတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းများကို ရေးဆွဲ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနမှ သိရှိရသည်။
အဆိုပါ ကိန်းဂဏန်များ အတိအကျကို ရရှိမှသာ လူဦးရေစာရင်း၊ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း၊ လုပ်သားအင်အား၊ စာတတ်မြောက်မှုနှုန်း၊ လူနေမှု အဆင့်အတန်း၊ အိမ် အကြောင်းအရာနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ မွေးဖွားခြင်းနှင့် သေဆုံးခြင်း၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ မိသားစု ပုံသဏ္ဌာန်၊ အရွယ်အစား၊ အသက်ကြီးရွယ်အို၊ လူတန်းစား ကွာဟမှု၊ အသက်မွေးလုပ်ငန်း၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ စသည့် အချက်အလက်များကို ရရှိနိုင်မည့် ဖြစ်ပြီး ယင်းကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ ကိန်းဂဏန်း အတိအကျ ရရှိမှသာလျှင် လိုအပ်ချက်များကို နိုင်ငံတော်က ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ယင်းဌာနမှ သိရှိရသည်။
သန်းခေါင်စာရင်း အချက်အလက်များ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် ထုတ်ပြန်မည် သတင်းမှ ကောက်နှုတ်ချက် ..
Aye Chan Mon# Credit To :The Voice Weekly http://www.facebook.com/thevoiceweekly >
MPC နဲ့ ရော ဘယ်တော့တွေ့မှာလဲ…???
Not sure, not sure
ဗဟုသုတလေး မျှဝေပေးလို့ ကျေးဇူး
စာလာဖတ်ပေးရို့ ကျေးဂျူး …အလင်းဝက် ..အဲ alinsett
ဖတ် ပီး မှတ် တွား ရို့ကျေး ဂျူး ပါ ချင့် ..
မှတ်သားလောက်ပါပေတယ်.. မအမ်ပီပီ… ကျွန်တော်တို. တတွေ အဲဒီ ပတ်စ်ဝက်တွေ ဒုက္ခပေးလွန်းလို. ပြသနာတက်ပေါင်းလဲများလှပေါ့..
အခုလိုလေ.. ရေးတော့.. ပြသနာကြုံသူတွေ လုပ်ရလွယ်တာပေါ့ဗျာ..
ဒါနဲ.. မအမ်ပီပီ ဆိုတာ အမ်ပီတီနဲ. ဘာတော်လဲဟင်… အဝိုင်းလေးလည်နေတဲ့အမျိုးတွေလားဟင်.. ဟိဟိ..
ဒီပို.စ်လေးကို မှတ်ထားလိုက်တယ်နော်.. ကျေးကျေး
ဟုတ်ရယ် အမျိုးဒွေ တိတ်ရှစ်ဒါပဲ့ …ဒီကလည်း ပြန်ပီး ကျေးကျေး …
ကွကိုယ်စိတ်မချလို့ ဖုန်းကို ဘယ်တော့မှ လော့ချမထား ပတ်စ်ဝပ်မထားကြောင်းပါ… တစ်ခါတစ်ခါ ပလပ်ကျွတ်တတ်တာရယ်
ေိခိ … ဒါမျိုးဒွေလည်း ဖစ်တတ်ပါဒယ် ..
ps. wc = ဝဲလ်ကမ်း
ကိုယ် မှတ်မိတာပဲ ထားတယ်။ မခက်ခဲဘူးးး
အကြောင်းသိတွေကတော့ ထားမနေပါနဲ့တဲ့ ။
ထုတော့ ထားတော့ပု …
အမှတ်မချိတဲ့ အသည်းရှိုတော့လည်း နောက်များမှ ထပ် ထား ချင် ထား မိ နေ ဦးမှာပါပဲရေ ..
ဟိဟိ (pw ကိုဆိုလိုတည်)
ကျေးဇူးပါရှင့်… pw တွေလည်း မခံနေတော့ပါဘူး.. ဟီး.. gallery နဲ့ မက်စိတော့ pw ခံထားရတာပေါ့နော်…
အခုလို သိထားရတော့ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ရင်လည်း ပြောပြပေးလို့ ရတာပေါ့.. ကျေးဇူးပါနော်..
အဟင့် ..တူများရို မဖစ်စေနဲ့ …
စခွင်လော့ခ်တော့ထားတယ်တော့…။ အဲ့သဟာတော့ ဘာမှ မဖြစ်လောက်ဘူး မဟုတ်လားဟင်…..။ စေတနာနဲ့ ဖော်ပြပေးလို့ ကျေးဇူးပါ မပုလဲ
screen lock က ကိစ္စသိပ်မရှိဘူး.. ဖုန်းဆိုင်တွေက ပြန်လုပ်ပေးလို့ရတယ်လေ…
နောက်စေတနာတစ်ခု ထပ်တင်ထားသေးဒယ် …ဖတ်ကြည့်ပါအူးးးးး ဗြဲ ဗြဲ
မပုလဲရေ. . . အမှန်ပဲ . . . သူတို့ဆီမှာ သက်သက်သွားအအော်ခံရသလိုပဲ . . . သိပ်စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတယ် . . . ရုံးပိတ်ချိန်နီးနေရင်ပိုဆိ်ုး . . .
long time no see MG
MG means Myanmar Gazette ;)